10 Akawanda Epic Surf Kuki muEurope | Save A Train
musha > Kufamba Iceland > 10 Akawanda Epic Surf Kuki muEurope
Sandy mahombekombe, mawere maonero, yakajeka mvura yebhuruu, uye nharaunda dzinoshamisa dzekushambira, aya ma1o epic surf nzvimbo muEurope akakwana kune vafambi pamatanho ese. Kubva kumahombekombe eItaly kusvika kure Denmark, uye Portugal, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Godrevy Gungwa, England
Kana nguva yakwana, iwe unogona kunge uchitasva imwe epic yakareba yekumadziro madziro uye kodzero pano. Ehe, Godrevy pamhenderekedzo neAtlantic ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushambira muEurope. Inowanikwa muCornwell, mumwe we maguta anonyanya kufadza emahombekombe muEurope, gungwa iri rinonyanya kufarira munharaunda yemasaisai.
Godrevy pamhenderekedzo chikamu cheSt Ives Bay, uye muzhizha, iwe unowana pano vazhinji veko pane avo mazororo chirimo. Kazhinji sunbathing, kuvaka dzimba muzuva, kana kuyemura imba yemwenje, tisingazive kuti Godrevy inopa kumwe kwakanakisa kuzvimba muEurope.
apo: chitubu, Kubvumbi kwemafungu akachena.
2. Akawanda Epic Surf Kuki muEurope: Peniche Portugal
Hora kubva kuLisbon airport, yechipiri epic surf yekuenda muEurope yakamirira iwe muPortugal. Peniche iri peninsula chaiyo kumahombekombe ePortugal, iyo inogadzira mamiriro akakura emafungu ane mukurumbira gore rese. Uyezve, Mhenderekedzo dzePortugal ndedzimwe mahombekombe anonyanya kurota muEurope.
Pfungwa inonakidza inotsemuka, sandbar reef, kuwedzera kune anoshamisa marefu mahombekombe, ita kuti Peniche isvike kudenga. Nepo Peniche iri peninsula, kune zvinopfuura 30 nzvimbo dzekushambira mumahombekombe ayo, uye nzvimbo zhinji dzekurendesa magiya ekufambisa. Chinhu chimwe chete chekuisa mupfungwa ndechekuti iwe unoda wetsuit yegore rese, nekuda kwetembiricha yemvura inotonhora.
apo: Nyamavhuvhu kusvika Gumiguru
Kupi: Foz do Arelho inoshamisa kutambanudza jecha kuchamhembe kwePeniche kune vanotanga uye zvayakanakira, nekuda kwekuwanika mumutsara. Iyo bhuruu mureza kumahombekombe Supertubos ndiko kwauchakwira iwo anozivikanwa kwazvo mafungu muEurope, nekukurumidza uye nehasha. saka, kunze kwekunge iwe uine ruzivo surfer, ino wave ichakutorera pasi zvakaoma.
Wave: 80 cm kusvika 2.6 M.
3. Bundoran, Ayarendi
Mumakungwa anoyevedza epasirese, ine inoshamisa mawere maonero uye mahombekombe kuti ufambe pamwe, Donegal county ndiyo imwe yenzvimbo dzinoyevedza muIreland. Bundoran town muIreland ine imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekusevha muEurope kune super-advanced surfer.
Bundoran is home to the most famous waves, iyo Peak. Peak iri kuruboshwe yakakwana, yakasimba uye ipfupi. saka, mushure mekutasva masaisai akakwana iwe unogona kutora pint mune yemuno bhawa, nevashanyi veko.
Wave: o.50 kusvika 2.7 M.
4. Akawanda Epic Surf Kuki muEurope: Klitmoller, Dhenimaki
Zvikepe zvekuredza, vafambi, uye jecha pamhenderekedzo inosangana neiyo inokwira Gungwa reNorth ndiyo mamiriro aunozoona muKlitmoller. Iyi furemu uye okunze ndizvo zvakawana guta diki reKlitmoller zita rekuti "Cold Hawaii”.
Pamusoro pekufambisa, Klitmoller ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekumhepo yekumhepo muNorth Europe. saka, unogona surfers akatasva mafungu gore rose. Chimwe chinhu chinoshamisa pamusoro peKlitmoller ndiko kuswedera pedyo neWako national Park uye ayo mamiziyamu, kwaunogona kuwana kukurudzirwa neViking ngano, usati wabata iyo yakakwana wave.
apo: gore rose.
Sei: mamiriro ekunze akakwana, kune vese vafambisi, gore rese.
Mabhishi ari muBiarritz mamwe emahombekombe anotyisa muFrance, ndoda Europe. saka, hazvishamise kuti Biarritz inzvimbo inoshamisa yekushambira kuEurope. La Graviere wave inokwezva vafambi kubva kumativi ese epasi kuenda kuAtlantique Pyrenee mukutsvaga mushure mekuzunguzika.
Ipo Hossegor inokwezva vashanyi kuzororo negungwa, nharaunda yemasaisai pano ndeimwe yeakanakisa muEurope. saka, iwe unogona kuwana nzwisiso pane yakakwana wave pamusoro pekofi uye croissants kubva kune pro surfers muFrance. Pamusoro pe, Hossegor mauto iyo yegore rose yeWSL kushanya kwenyika chiitiko.
For: vafambi mumatanho ese uye pamhando dzese dzemabhodhi.
Sei: Yakakura barreling beach break.
apo: Autumn kusvika kutsime, kubva pakati paGumiguru guta rinodzima, uye mafungu anokwira kusvika kune epic la Guva. saka, unogona kuronga rwendo rwako kune ino epic surf yekuenda, uye kugara mumahotera kana kukwereka karavhani pamhenderekedzo.
Saizi yeave: 0.5 kuti 2.5 M.
6. Akawanda Epic Surf Kuki muEurope: Chitsuwa chaLewis, Scotland
Iko iko kuzvimba kwekuchamhembe kunosangana neAtlantic, mafungu anopenga uye mhepo ine simba, gadzira iyo epic surfing nzvimbo muScotland. Chitsuwa cheLewis chiri pakati pezvitsuwa zveAtlantic Outer Hebridean ndechimwe chezvakanyanya wakajeka nzvimbo muScotland.
saka, Isle of Lewis iparadhiso yekushambira, asi chete kune vafambisi vemberi. Aya mafungu anotyisa haasi evatangi vachiri kunetsekana kupeta uye kupinda mumashure nekodzero.
apo: matsutso nechando.
Windsurfing, kitesurfing, kana kodzero dzekusevha, IHague inzvimbo huru yekufambira mazororo, chete a chitima rwendo kure neAmsterdam. Kunyangwe ichitaridzika kunge yegore grey uye isingagamuchire, asi kune vafambisi, inogadzira mamiriro akakwana ekutasva masaisai akakwana.
Iwe unogona kubata iko kuzvimba kwese pamwe ne11-km makiromita, kunyanya pamhenderekedzo yeScheveningen. pano, iwe uchawana vanofambisa pamusoro pamatanho ese uye akanakisa masefisi ezvitoro uye zvivakwa.
Kupedza, Hague inozivikanwa nebasa rayo rezvematongerwo enyika, ndiyo imwe yenzvimbo dzinotyisa dzefish muEurope.
8. Akawanda Epic Surf Kuki muEurope: San Sebastian, Speini
Pamuganhu pakati peFrance neSpain, Munyika yeBasque, San Sebastian iguta rinotyisa regungwa, ine epic nzvimbo dzekushambira. pano, iwe unenge uchisvetuka kubva wave kusvika tapas mabhawa, uyezve kuzorora pamhenderekedzo yejecha mune rimwe remaguta akanaka kwazvo eSpain.
Cantabria ine mamwe mahombekombe anoshamisa uye nzvimbo dzekushambira, kunge Zurriola kumahombekombe, yekupedzisira surfing pamhenderekedzo muSan Sebastian. Izvo zvakanaka kune vanotanga uye vafambisi vepakati. zvisinei, kwemaonero akajeka, tarisa mafungu muLa Concha beach.
Sei: kukurumidza kusara mubhawa rakavhurika.
Wave: kuputira kwakanaka-kutenderera kuchamhembe kwakadziva kumadokero kuzvimba.
apo: Mbudzi kusvika Zvita.
Watergate Bay ndiyo nzvimbo yekufambisa muUK, uye mazana evashanyi vanopinda mumakwikwi eChirungu yenyika yekusevha vanobvumirana. Windsurfing uye wave surfing inozivikanwa kwazvo pano, kugadzira Watergate Bay imwe yeiyo 10 most epic surfing destinations in Europe.
Sennen Cove muCornwell ndeimwe inonakidza nzvimbo yegungwa nenzvimbo yekusefera. Sennen Cove uye Praa Sands inzvimbo dzinoyevedza dzekushambira nemabhichi anoshamisa.
Sei: mhepo uye kuvhurika kwakaringana kune vafambi pamatanho ese.
10. Akawanda Epic Surf Kuki muEurope: Sardinia, Itari
Chitsuwa chakanakisa cheItaly cheSardinia chinovhara iyo 10 epic surf nzvimbo zhinji muurongwa hweEurope, neGungwa reMediterranean uye jecha pamhenderekedzo. pano, unogona kubata mafungu madiki kusvika epakati, kana mafungu ane simba kumadokero. Uyezve, ne 300 akakwana mazuva, Sardinia iparadhiso yekushambira.
zvisinei, kana iwe uchida kuchovha epic kuzvimba, wobva waronga zororo rako rekusevha muSardinia, kubva munaNovember kusvika munaNdira. Costa Verde, Buggero muSan Nicolo, uye Porto Ferro muAlghero vari 3 of the beautiful and best beaches for surfing.
apo: Nyamavhuvhu kusvika Mbudzi, kana Kurume kusvika Chivabvu.
pa Save A Train, tichave tichifara kubatsira kuronga zvinoshamisa kushanya pazororo kune iyo 10 most epic surfing destinations in Europe. Rwendo rwechitima kuenda kunzvimbo yekuenda uye imba inorota kure nemusha ndiyo inokurumidza uye inodhura nzira yekufamba.
Iwe unoda here kupinza yedu blog positi "10 Yakawanda Epic Surf Kushanyira MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)